[Review] Massacara Kiss Me loại nào tốt và nên mua nhất? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Massacara Kiss Me loại nào tốt và nên mua nhất? | Muasalebang in Muasalebang
A ingcebo for mncane, iDemo kanye nokuntuleka imivimbo curvature kukhona ibhulashi le-mascara. Ngaphambi kwezinhlobonhlobo zamamodeli, manje, i-Kiss me eyelashes iyathandwa futhi ibuyekezwa kakhulu ngabantu abasha. Ngakho-ke ingabe lo mkhiqizo usebenza kahle njengoba ufuna? Sicela uthole imininingwane engezansi ukuze ube nokuhlola okunembe kakhulu kwesihlahla Mascara Kiss Me.
1 Mayelana ne-Kiss Me mascara brand
2 Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-4 zezandiso ze-Kiss Me zamashiya ezishisa kakhulu njengamanje
2.1 2.1 I-Mascara Kiss Me Long & Curl pink
2.2 2.2 Kiss Me Volume & Curl Purple Mascara
2.3 2.3 Kiss Me Heroine Yenza I-Curl Keep Base Mascara
2.4 2.4 Kiss Me Mascara ansundu
3 Hlukanisa phakathi kwezinkophe zangempela nezingamanga ze-Kiss Me
Mayelana ne-Kiss Me mascara brand
I-Kiss Me imascara ka-Isehan engunombolo-1 e-Japan. Ukuletha emakethe yezimonyo ama-eyeliner wezinga eliphezulu kanye nama-mascara kanye nezisusa zezimonyo, uhlobo luthenjwa abantu abaningi.
Imikhiqizo yalo mkhiqizo ikhishwa 100% emvelweni
Izithako emigqeni yomkhiqizo walo mkhiqizo zikhishwa i-100% emvelweni njengokuthi: i-chrysanthemum essence, amafutha e-camellia, amafutha e-argan .. iphephile kakhulu futhi iyingozi kwabesifazane. Ngesikhathi esifanayo, imiphumela ye-Kiss Me eyelash line mihle ngempela, imnika imiphumela yemilingo e-eyelashes kanye nokudala isimo esisha sobuso ebusweni bakhe.
Ngaphezu kokuguqulwa kwezinkophe ezinde nezigoqene lapho usebenzisa izimonyo, umkhiqizo ubuye ube ne-conditioner eyandisa ama-eyelashes ngemva kokusetshenziswa okuningi futhi ama-eyelashes abe namandla.
I-Merzy I-Mascara Yokuqala 8ml, I-Anti-Drip, Ayikho I-Smudge Usuku Lonke I-Mascara Merzy I-Mascara Yokuqala 8ml, i-Merzy
I-Mascara Pure Coconut Amafutha Ashukumisa Izinkophe Zikhule Kakhulu Futhi Zibe Zinde I-MILAGANICS 5ml (Typ), Milaganics
I-Clinique Lash Power Mascara Ye-Formula Mini Egqoke Isikhathi Eside, CLINIQUE
I-Maybelline New York Hyper Curl I-Mascara Engangeni Manzi Ihlala Isikhathi Eside futhi I-Curling Lashes 9.2ml, Maybelline
I-Maybelline Falsies Lash Lift I-curling esheshayo, i-Thickening kanye ne-Long Mascara Mascara engangenwa ngamanzi engu-8.6ml, Maybelline
I-Mascara Ende futhi Egobile MISSHA 4D Mascara, Misha
I-Mascara I-Mascara Yami Yansuku zonke 5.5g Browit #Endless Night, Browit
Ukubuyekezwa kwezinhlobo ezi-4 zezandiso ze-Kiss Me zamashiya ezishisa kakhulu njengamanje
Izinzuzo ezivelele zomugqa Mascara Kiss Me kubenze bafisa ukuba ngabanikazi ngaso leso sikhathi. Ngakho-ke ake sibheke Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwezandiso ze-Kiss Me ezithandwayo ezi-4 namuhla.
2.1 I-Mascara Kiss Me Long & Curl pink
Idizayini ye-Kiss Me enekhanda lebhulashi eligobile, ukuminyana okuncane kwezinwele zebhulashi eziwugqinsi kwenza inqubo yokufaka ezinkopheni ibe lula ukusuka empandeni kuya kwesinye, ifanele labo abasanda kuqala ukufunda izimonyo. Okwamanje Kiss Me mascara pink Lo mkhiqizo unamandla okunweba nokugoqa ama-eyelashes, athandwa futhi athenjwa ama-eyelashes amafushane.
Kiss Me eyelashes pink Kunemibala emi-2 ehlukene ye-mascara ensundu nemnyama ongakhetha kuyo. Umbala onsundu we-mascara usiza ukugoqa imivimbo emide futhi eqinile, lo mklamo utholakala ephaketheni elihle elipinki elikhangayo. Ikhasi elipinki elimnyama linomkhawulo omnyama okhilimu osiza ukudala imivimbo emide, ebukhali.
Ingenamanzi kakhulu, isiza ukhilimu ukuthi uhlale isikhathi eside, ugcine ukugoba kwamehlo usuku lonke. Intengo yokuthengisa yesithenjwa sakho ngu-320,000 VND ye-mascara ephinki ethandekayo.
2.2 Kiss Me Volume & Curl Purple Mascara
Mascara Kiss Me purple Inomklamo okhethekile onebhulashi elimise okwefeni elikama kalula umvimbo ngamunye ogoqekile futhi ohlala isikhathi eside. Ukhilimu omnyama ebhulashini elinsomi elijulile lidala ama-curls amade, amnyama. Ngaleyo ndlela isiza amehlo akhe ukuba abe yindilinga futhi athandeke kakhulu.
Esihlahleni esinsomi esikhanyayo, kunombala okhilimu we-mascara onsundu odala ubuhle obungasentshonalanga kakhulu bamehlo akho. Ladies with light makeup taste, kufanele ngokushesha ulethe le eyeshadow ye-Kiss Me onsomi esikhwameni sakho sezimonyo ngokushesha, ukuze udale ama-eyelashes amade agoqene kanye neso elihle ukuheha umuntu ophambene.
2.3 Kiss Me Heroine Yenza I-Curl Keep Base Mascara
Lo mugqa we-mascara unegobolondo eliluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama eliqukethe imicu emi-4 enobude obungu-5mm ukusiza izinkophe ezinde nezigoqe ngemva kokufaka. Lo mkhiqizo usetshenziswa njenge-primer ngaphambi kokufaka amanye ama-mascara ukusiza ukondla nokushelela imivimbo.
Kiss Me imivimbo eluhlaza okwesibhakabhaka inamandla okugcina ukugoba kwe-eyelashes usuku lonke ngaphandle kwemibimbi. Izithako ku-mascara ephephile ziqukethe; Amafutha abalulekile e-Rose, i-royal jelly, amafutha e-argan awavikeli nje kuphela izinkophe kodwa futhi avikela amehlo kahle.
Uma usebenzisa lo mugqa we-eyelashes, uzodala i-primer ephumelelayo yamehlo amahle futhi ajulile. Intengo yomkhiqizo yi-290,000 VND.
2.4 Kiss Me Mascara ansundu
Ithoni ensundu kanokusho idala umkhuba wokwenza abantu abasha, ithoni yombala isentshonalanga kakhulu, ithoni yesikhumba, ifanele labo abanesikhumba esimnyama, kuyilapho isikhumba esimhlophe kungadingeki sisetshenziswe, siheha wonke umuntu oseduze.
Umkhiqizo unamandla okuguqula imivimbo emifushane, emincane ibe mihle kusukela ekuthinteni kokuqala kwebhulashi. Izithako ku-wand ye-mascara ye-Kiss Me ziqukethe okukhishwe kwe-chrysanthemum okondla futhi kuthambisa imivimbo, ukuze ukwazi ukuyifaka usuku lonke ngaphandle kokuthi izinkophe zakho zome, noma zigoqe.
Ukumelana namanzi okuphezulu, ubude bemivimbo ehlala isikhathi eside bungalungiswa kusitayela sakho se-makeup osithandayo. Intengo yalesi mascara esinsundu se-Kiss Me ingu-350,000 VND.
Hlukanisa phakathi kwezinkophe zangempela nezingamanga ze-Kiss Me
Ngiqabuze Njengamanje, kunemikhiqizo engamanga entantayo emakethe, ngakho-ke ukuthenga imascara evamile, khumbula amanothi alandelayo ngokushesha:
Indawo yokuthengisa: Thenga izimpahla ezitolo zangempela ze-Kiss Me, abasabalalisi noma kuwebhusayithi ephambili yomkhiqizo we-Isehan, noma ungacela ojwayelene nabo ukuthi baziphathele ngokuqondile usuka e-Japan. Nakanjani ungathengi ezindaweni ezingenaso isiqinisekiso sokuphepha komkhiqizo kanye nekhwalithi.
Isoftware yokuhlola impahla: Uma uyithenga eVietnam, ungayibheka ngokucophelela ngesoftware ye-ICheck yamazwe omhlaba.
Ukupakishwa:Ivalwe izinhlangothi ezi-2 ezihlukene, iso elilodwa lenziwe ngekhadibhodi elinolwazi lomkhiqizo oluphrintwe ngonxande. Olunye uhlangothi ipulasitiki ecacile, kulula ukubona umkhiqizo ngaphakathi.
Amanothi lapho uthenga imascara ye-Kiss Me yangempela
Uhlaka lomkhiqizo: I-mascara yangempela inamagama abukhali, acacile, kuyilapho imikhiqizo eyinkohliso inemigqa engacacile.
Igama lomkhiqizo: Izandiso eziningi ze-eyelashi ezingamanga ngeke zilinge ukulingisa umkhiqizo oyinhloko, ngakho-ke zivame ukushiywa futhi zilungiswe ukuze zifane negama langempela abathengi abangalinaki kangako.
Inani: Ulayini wemascara unenani lohlu lwe-310,000 – 350,000 VND, uma uhlela ukuthenga endaweni enenani elithambile, kufanele ulahle ngokushesha leyo nhloso.
Ukusebenzisa i-mascara yomlingo kusiza ukwenza ifasitela emphefumulweni lithandeke futhi likhange. Ngemigqa Mascara Kiss Me Isihloko esingenhla sizokwenza amaphupho akho afezeke, ngakho shesha ukhethe umkhiqizo ongcono kakhulu ukuze udale ubuhle kuma-eyelashes akho ngokushesha.
Cách dùng Zalo tra cứu số điện thoại Cảnh sát khu vực | Muasalebang